မျက်လုံးထဲကမထွက်အောင် ဆက်ဆီကျကျ အမိုက်စားလှုပ်ခါပြီး ချစ်ပုရိသတွေ ရဲ့အသည်းကို ခြွေချလိုက်တဲ့ ‘ခင်လွှမ်း’လေးရဲ့ ဗီဒီယို – Shwe Naung
မျက်လုံးထဲကမထွက်အောင် ဆက်ဆီကျကျ အမိုက်စားလှုပ်ခါပြီး ချစ်ပုရိသတွေ ရဲ့အသည်းကို ခြွေချလိုက်တဲ့ ‘ခင်လွှမ်း’လေးရဲ့ ဗီဒီယို
N N | December 30, 2020 | Celebrity | No Comments
ချစ် ပရိသတ်ကြီးရဲ့ အာရုံကို ဖမ်းစားထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် ‘ခင်လွှမ်း’ကတော့ ဂစ်တာရှိတ် လေးလို ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းအလှကြောင့် အမျိုးသားချစ် ပရိသတ်တွေရဲ့ မျက်စီကျ အားပေးဝန်းရံမှုကို အခိုင်အမာ ရရှိထား သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
သူမ ကတော့ အခုဆိုရင် ချစ်သူ စည်ဖြိုးနဲ့ နှစ်ဦးသဘောတူ လက်ထပ်ခဲ့ ကြပြီ နှစ်ကိုယ်တူ ရွှေလက်တွဲ ပြီးဘဝတစ်ခုကို ထူထောင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာ ထက်မှာ သူမရဲ့ အလန်းစား ‘Tiktok’လေးတွေဟာ ရေပန်းစားလူကြိုက်များကာ ချစ် ပုရိသတွေ ဝန်းရံနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် အလှတရားတွေပေါ်လွင်စေတဲ့ အလန်းစား ကပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို မကြာခန ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီ ဗီဒီယိုလေးထဲမှာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ အပြတ်အသတ် ကိုလန်းနေတာကြောင့် ချစ် ပုရိသတွေ ကြွေစေမှာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောကျာ်းလေးချစ် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှု အများဆုံးရရှိထားတဲ့ သူမကတော့ အမြဲလိုလို မရိုးနိုင်တဲ့ အလှတရား တွေနဲ့ ညို့ယူ ဖမ်းစားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် ‘ခင်လွှမ်း’ရဲ့. အလန်းစား ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး နဲ့အတူ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးတွေ ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုအားပေးသော ချစ်ပရိသတ် လည်းသာယာ ပျော် ရွှင်သော နေ့လေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ လို့ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
Source: Khin Hlwan
ဒီ ဗီဒီယို လေးထဲမှာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ အပြတ်အသတ် ကိုလန်းနေတာကြောင့် ချစ် ပုရိသတွေကြွေစေမှာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောကျာ်းလေးချစ် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှု အများဆုံးရရှိထားတဲ့ သူမကတော့ အမြဲလိုလို မရိုးနိုင်တဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ညို့ယူ ဖမ်းစားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် ‘ခင်လွှမ်း’ရဲ့. အလန်းစား ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး နဲ့အတူ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးတွေ ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုအားပေးသော ချစ်ပရိသတ် လည်းသာယာ ပျော် ရွှင်သော နေ့လေး ပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြပါစေ လို့ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနှင့် ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ အိချောပိုရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……..
သူ့ရဲ့အလှ သူ့ရဲ့အပကတော့ တစ်မူထူးခြား ပြီး အေးမြကြည် လင်တဲ့ ခေးဆက်ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး များ
မိမိ နိုင်ငံကို ပြန်ကယ်တင် ဖို့အတွက် မွေးထုတ် ပေးလိုက် တယ်လို့ မှတ်ယူလိုက် ကြောင်းပြောပြ လာခဲ့တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး….
အမိုက်စား ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေး ဝတ်ဆင်ကာ အထာကျကျ လှပနေတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ……..